Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. मन्त्रीकी छोरीको बिहेमा १ लाख पाहुना, ८ अर्ब खर्च – Emountain TV
एजेन्सी, ६ चैत । हामीकहाँ ठूलाबडा मान्छेहरुले आफ्ना छोराछोरीको बिहेमा तडकभडक देखाए भनेर आलोचना हुने गर्दछ । यस्तो आलोचनाको सिकार कहिलेकाहीँ नेताहरु पनि हुने गरेका छन् । यद्यपि हामीकहाँ जतिसुकै महंगो बिहे भए पनि त्यो धेरैमा करोडको अंक होला । उता भारतमा चाहीँ ८ अर्ब खर्चिएर एकजना नेताले आफ्नी छोरीको बिहे गराइएको थियो ।
कर्नाटक राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री बी श्रीरामुलुले खर्चमा इतिहास रच्दै छोरीको बिहे गराइदिन लागेका हुन् । कर्नाटकमा भारतीय जनता पार्टीका संकटमोचक भनेर समेत चिनिने दलित नेता श्रीरामुलुले छोरी रक्षिताको बिहे गत मार्च ५ मा तय गरेका थिए । छोरीको बिहेमा नेतानीले पानी झैँ गरी पैसा बगाए ।
हैदरावादका एकजना उद्योगपतिसँग मन्त्रीकी छोरीको बिहे भएको हो । पाँच तारेखमा हुने बिहेको पूजाआजा तथा भोजभतेर २७ फेब्रुअरीमै भएको छ । ९ दिनसम्म चलेको उक्त समारोह भारतमा यो दशककै सबैभन्दा महंगो बिहे हुने बताइएको छ ।
स्मरण रहोस् यसअघि कर्नाटकमै जनार्दन रेड्डी नामका नेताले छोरीको बिहेमा करोडौँ खर्च गरी सबैभन्दा महंगो बिहेको रेकर्ड रोखका थिए । श्रीरामुलुले उक्त रकेर्ड तोडेका छन् ।
मन्त्रीले छोरीको बिहेमा भारतका शीर्ष नेताहरुसँगै ५ सय पुजारीहरुलाई समेत निमन्त्रणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्रीलगायतका नेताहरुलाई उनले व्यक्तिगत निमन्त्रणा नै पठाएका थिए । विशिष्ठ पाहुनाहरुको बसोबासका लागि बैंगलोरमा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । बिहेको लागि १ लाख पाहुनाहरुलाई निम्तो कार्ड पठाइएको थियो । निम्ताकार्ड सँगै केशर, सुकुमेल, सिन्दुर, बेसार तथा अक्षता पनि पठाइएको छ ।
४० एक्कड क्षेत्रफलमा फैलिएको प्यालेस ग्राउण्डमा उक्त बिहे समारोह भएको थियो । जसमध्ये १५ एक्क्ड त गाडीको पार्किङका लागि मात्र छुट्टाइएका थिए ।
पछिल्लो ३ महिनादेखि बिहेको मण्डप निर्माण कार्य भैरहेको थियो । समारोह स्थल हम्पी विरुपाक्ष मन्दिरसमेत अन्य मन्दिरको स्वरुपमा तयार गरिएको छ, जुन ४ एक्कडमा फैलिएको छ ।
मण्डप तथा बिहे समारोह स्थलमा फूलहरु सजाउनका लागि २ सय मजदूर खटिएका थिए । बिहे समारोह हुने सेट डिजाइनका लागि बलिउडबाटै कला निर्देशकहरुलाई बोलाइएको थियो ।
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणकी मेकअप आर्टिस्टले बेहुलीलाई सजाएकी थिईन । बलिउड तथा दक्षिण भारतीय फिल्मका चर्चित क्यामराम्यानहरुले बिहेका दृश्यहरु खिचेका थिए । बेहुली पहिरनको डिजाइन चाहीँ चर्चित डिजाइनर सानिया सरदारियाले गरेकी थिईन् ।